विश्वको नजर नेपालतीर, कोरोना विरुद्धको खोप परिक्षण गर्न तीन कम्पनी नेपालमा
काठमाडौँ – कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादनमा लागिरहेका तीन औषधि उत्पादक कम्पनीले नेपालमा तेश्रो चरणको परिक्षण सुरु गरेको छन । खोप विकासको चरणमा रहेका चीनको हङ् सी, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको आष्टा जेनेका र रुसको गेमेलियाले नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न लागेका हुन ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले खोप विकासको चरणमा रहेको चीनको हङ् सी, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको आष्टा जेनेका र रुसको गेमेलियाले तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न लागेको पुष्टि गरेको छ । परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार चीनको हङ सीले चिनियाँ कम्पनीमा कार्यरत एक हजार जनामा खोप लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकाबमोजिम तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलका लागि खोप निर्माता कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशमा ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । रुसी खोप उत्पादकलेसमेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव राखेको परिषद्का सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए ।